မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မြန်မာ့သမိုင်း Myanmar History World War2– worldwar2movietimeline
မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မြန်မာ့သမိုင်း Myanmar History World War 2
We do NOT own ALL video materials and all credits belong to respectful In of copyright immediately for further credits or clip delete. To contact – thaminechannel2020@gmail.com
Published March 2, 2022 By MSK Channel
Categorized as Uncategorized Tagged History, Myanmar, War, World, world war 2, ဒတယကမဘစစ, နင, မနမနငင, မနမသမင
The Football Myanmar says:
ရှစ်တန်းနှစ်တုန်း ဆရာကသမိုင်းသင်ရင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းတို့ငါတို့ဆင်းရဲနေဘာကြောင့်လည်းလို့မေးတော့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ကအမေ အဖေစီပွားမလုပ်တတ်လို့လားလို့စဉ်းစားနေခဲ့တာ ​နောက်ပြီဆရာက 😢😢လွတ်လပ်ရေးသွားလို့တဲ့ မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်ရေးမရင်ဒီလိုမနေရဘူးလို့ပြောတော့ ကျွန်တော်တို့ကြောင်ကြောင်ကြည့်ပြီ 😢😢ဆရာက နောက်နေတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့တာ ကိုယ်တွေအရွယ်ရောက်လို့သိလာမှ ဆရာပြောတကယ်ပါလား သူ့ပြောခဲ့တာစခဲ့တာမဟုတ်မှန်းသိခဲ့ရတာ ကျောင်းစာအုပ်ထဲက သမိုင်းတွေက စောက်တလွဲဆိုလည်းသိခဲ့ရတာ
ဒီလိုဖြစ်ရတာဗိုလ်အောင်ဆန်းကြောင့်😢😢ဒီလိုပြောလို့ဆဲလည်း မတတ်နိုင်ဘူး အဂ်လိပ်ချုပ်မှုတွေ မြန်မာပြည်အဆက်ဆက်မင်းတွေထက်အများကြီးတရားမျှတမှုရှိတယ် အေးချမ်းတယ် အခုလိုဒီ စစ်ခွေးတွေအုပ်ချုပ်မှုတွေက အဲဒီအတိတ်ရဲ့ ဖြစ်ရက်တွေနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်တယ် အဂ်လိပ် ကိုရေးတော်လှန်ခဲ့တာကလည်းဘာသာရေးဝါဒ နောက်ပြီဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကြောင့်ပါတယ် အဂ်လိပ်ချုပ်မှုအောက်မှာတိုးတက်မှုအများကြီး ပညာရေး စီပွားရေးတခြားစီပဲ မြန်မာလူမျိုးတိုင်းရင်သားအချင်းချင်းတောင် စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူး အခုမှတကယ်ကျွန်ဖြ၀်နေတာ အဲတာအမှန်တရားပဲ
burma communist party says:
Aye Aye Thant says:
ဒီကောင်လေး ကိုဇော် ရဲ့အသံကဘာလေးပြောပြောအလွန်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်
Fock Yu Ho says:
Phe Law Har says:
ခုခေတ်မြန်မာလူငယ်များ ကျွန်တော်တို့လူငယ်များ ဘာမှမသိကြပါဘူးကွာ သိပ့်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ
ခုခ်ိန္ထိသမိုင္းမွန္မေျပာဘဲတစ္လိမ္ထဲလိမ္ေနတုံးပဲေနာ္ သိုင္းရင္းသားအားလုံးကႀကိုးစားျပီးလြတ္လပ္ေရးကိုရရွိခဲ႔တဲ႔အေႀကာင္းက ဒီေနရာမွာဘာလို႔ထုပ္မေျပာတာလဲ ပြင့္လင္းစြာေျပာဆိုပါလိမ္တဲ႔ေခတ္ကုန္ျပီ ခုခ်ိန္ကပိုျပီးသိုင္းရင္းသားေတြစည္းရုံးရမယ့္အခ်ိန္မို႔ျမန္မာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒီစြဲမေနသင့္ေတာ့ဘူး
တွေပေါ့ တော်လှန်ရေး စိတ်ဓာတ်အပြည်ရှိ
Win Shwe Kyi says:
ကျူးကျော်ဝင်လာတဲ့ဂျပန် စစ်တပ်းများထံမှတရုတ်ပြည် ဘက်ခိုလှုံရန်ထွက်ပြေးကြိုးစားစဉ်ကျွန်ုပ်၏အဖိုးသည်လမ်းမှာချောလဲ ကျသေဆုံးခဲ့သည်.စစ်ပွဲ ဆိုသာ ပြည်သူ တွေ ဒုက္ခ အခံရဆုံး.
Kothihakothiha Kothihakothoha says:
oppoမ႐ိုးသားတာဘယ္သူေတြလဲမသိ oppo says:
1. ပျောက်ကျား စနစ် ဖြင့်..တော်လှန် ရေး အောင်မြင် သည်ထိ တိုက် သွားမည်..
2. ရပ်ရွာ တွင်းဝင်၍..ပြည်သူ ကို ဒပြတိုက် ညှင်းပမ်း.. ခိုးဆိုး လုရက်..အနိုင် ကျင့်နေသော..စစ်ရဲ.. အရေခြုံ.. သူခိုးဒပြ များ ကို.. အဓိက..ပစ်မှတ် ထား ၍..အမြစ်ပြတ်.. သုတ်သင် ရှင်းလင်း မည်..
3.ရွေ့လျား နေသော ရဲ/စစ် အရေခြုံ.. ဒပြများ ကို..မြို့ရွာ..အဝင် အထွက်.. များ တွင်.. အပြတ်ရှင်း သုတ်သင် မည်..NO..POW..
4. Check Point..ကင်းစခန်း များ..ပြည်သူ ကို ဒုက္ခ ပေး..စိတ်မချမ်းမြေ့ အောင် လုပ်နေသော..မအလ ဘောမများ ကို
အဓိက ထား အပြတ်ရှင်း မည်..
5.ပြည်သူ ကို ဒုက္ခ မပေးသော..မည်သည်..စစ်တပ် ကို မျှ မတိုက်ခိုက် ရ..
6. CDM ပြည်သူ့ ရဲ နှင့် စစ်သား များ ကို..သိမ်းပိုက် နယ်မြေများ..အခြေခိုင်မာ ရေး တွက် လုံခြုံ ရေး နှင့် တပ်သား သစ် စစ်သင်တန်း များ ပေးရန်..ဒေသခံ pdf များ နှင့် တာဝန်ချရန်..
7. ပြည်သူ ကို ဒုက္ခမပေး သော တပ်စခန်း များ ကို..POW စခန်းများ..အနေဖြင့်.. လစ်လှတ် ထားပြီး..CDM မလုပ်ရဲ သေးသော တပ်မတော်ဝန် ထမ်းများ ကို..ပို နေမြဲ ကျား နေမြဲ ထား ရန်..
8. ပြည်သူ နှင့် မပူးပေါင်း သော ရဲ စခန်း များ ကို ဒေသခံ pdf များ က သိမ်းပိုက် ..လက်နက်ယူ
9. သမရိုးကျ..ထိပ်တိုက် conventional war များ ကို ရှောင်ရှားရန်
10. PDF အာဏာ သက်ရောက် သော ရပ်ရွာတိုင်း တွင်..ဆယ်အိမ်ခေါင်း များ ကို လျီု့ဝှက်မဲပေး ရွေး တင်ပြိး..ရပ်ရွာ ဒီမိုကရေစီ ကောင်စီ ဖွဲ့၍ အုပ်ချုပ် ရမည်..
11. PDF..စိုးမိုး ရာ ရပ်ရွာ တိုင်းတွင် အသက် 16-45 နှစ်ကြား လူတိုင်း..ကိုယ်ခံပညာ..စစ်ပညာ..ရှေးဦး သူနာပြု ပညာ..သင်ယူပြီး..မိမိ ရပ်ရွာ၏ pdf တာဝန် ကို ထမ်းဆောင် ရမည်..
12.တာဝန် မထမ်းဆောင် နိုင်က..
pdf တွက် အလှူငွေ ရိက္ခာ.. ပံ့ပိုး ရမည်..
PDF ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မီတီ..aa
Ko kyaw Kyi says:
Bc Db says:
kyi san says:
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ သခင္ဆိုတဲ့အေခါ္အေဝါ္ကိုမၾကိဳက္ဘူး